AnyDesk: uzo ozo magburu onwe ya maka ijikwa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ | Site na Linux
AnyDesk: Ihe ozo di nma maka ijikwa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ
AnyDesk bụ ihe magburu onwe cross-ikpo okwu ọzọ maka ijikwa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ, nke dị ugbu a na ụdị ọhụrụ ya 5.0.0. Yabụ, ọ na-enye anyị ohere ijikọ na kọmpụta ebe dị anya, ma site na ngwụcha ọrụ ma ọ bụ ụlọ ma site n'ebe dị anya dị ebe ọ bụla n'ụwa. AnyDesk nwere ikike ịnye njikọ desktọọpụ dịpụrụ adịpụ ma nwee ntụkwasị obi nye ndị ọrụ ya, ma ndị ọrụ ụlọ yana ndị ọkachamara IT na-agagharị.
Ngwọta ngwanrọ a bụ nbudata n'efu, nyocha n'efu na ojiji nkeonwe. Agbanyeghị, ọ nwere ohere ịkwụ ụgwọ maka ya iji bulie elele ya. Ọ bụ obodo dị iche iche nke ndị ọrụ gburugburu ụwa na-atụ aro ya nke ukwuu, ebe o nwere atụmatụ (ọrụ na atụmatụ) magburu onwe ya, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nwa akwukwo iji dochie ụdị ngwa GNU / Linux yiri nke a mgbe achọrọ.
3 Ibudata na nwụnye
AnyDesk bụ ngwa nke ụlọ ọrụ nkeonwe akpọrọ «AnyDesk Software GmbH»Nke hiwere na Germany na 2014. Anybụ AnyDesk ya nanị ngwanrọ desktọọpụ nweta ngwanrọ nke ngwaahịa nke oge ebudatara karịa ndị ọrụ 150 nde n'ụwa niile, yana ihe nbudata nke 5 nde kwa ọnwa.
Otutu ihe ịga nke ọma a bụ n'ihi AnyDesk ịbụ sọftụwia dabere na koodu kodị nke ya, nke a na-akpọ "DeskRT", nke na-enye ohere iji rụọ ọrụ na-enweghị mmekọ ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị nso ma ọ bụ anya kọmputa na-achịkwa jikwaa.
Na mbipute ya nke 5.0.0 dị ugbu a, ụbọchị ịhapụ 24 / 04 / 2019, ọ gụnyere ozi ndị a:
Ikike ọhụrụ na mbufe faịlụ: site naMmezu nke mgbanwe na eserese eserese iji nwee ike ịnyefe faịlụ n'etiti ndị ahịa.
Nchọpụta onwe onye: na kwe ka ọchụchọ dị n'etiti kọmputa AnyDesk.
Mmezu nke usoro nche: iji «Tuncii TCP »na njikọ ndị dịpụrụ adịpụ.
New Bug fixes: Site na idozi ma ọ bụ idozi ọtụtụ chinchi ochie na nke ọhụụ, ha na - emezi nkwụsi ike, ojiji na arụmọrụ nke ngwa a.
Ihe ngosi ohuru: Achịkọ ọhụrụ nke akara ngosi dị n'ime ya na eserese eserese.
Ọrụ: Codec nwere ikike na nke ohuru eji, DeskRT, na-eme AnyDesk ngwa nwere ike ijikota na ịnyefe data onyonyo n'etiti kọmputa, n'ogo arụmọrụ mara mma, nke yiri ngwaahịa dị elu. Ọ na-arụ ọrụ ya na obere nsogbu ma ọ bụ nsogbu, na bandwit naanị 100 KB / Sec. Kedu ihe na-eme AnyDesk ka ọ bụrụ ezigbo ngwanrọ iji jikwaa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ na ebe nwere njikọ poorntanetị na-adịghị mma, na-enweta ezigbo nlele anya na naanị 60 FPS na netwọkụ mpaghara na ọtụtụ njikọ ịntanetị.
Nchebe: Teknụzụ TLS 1.2 ejiri, na-achịkwa ichedo kọmputa ọ bụla site na nnweta ikike. Ebe ọ bụ na etinyere "RSA 2048" na njikọ ndị ahụ, ya bụ, ihe nzuzo asymmetric 2048-bit key exchange encryption, iji nyochaa njikọ ọ bụla. Ọzọkwa, onye ọ bụla na-achịkwa kọmputa nwere ike inweta ya site na kọmpụta kọmpụta na ndepụta ndị ọcha nke ndị a tụkwasịrị obi. Nke a na-achota na ọ bụ naanị ndị ikike nwere ike ịmepụta njikọ.
Mgbanwe: AnyDesk na-ejisie ike ịnweta kọmpụta ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị ma ọ bụ nso ya, yana ịdị nfe dị mma. Ọ na-enye ohere mmemme na ndị ahịa a na-achịkwa, ohere na-enweghị nlekọta, na ntinye nke paswọọdụ. Na njirimara multi-platform ya pụtara na enwere ike iji ya site na ikpo okwu kachasị amasị gị, n'agbanyeghị ma ọ bụ Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, iOS ma ọ bụ gam akporo. Na mgbakwunye, AnyDesk dị mfe ibudata (+/- 5MB) ma ọ naghị ewe nnukwu ohere na draịvụ ike, yana ihe pere mpe karịa ndị yiri ya.
Nchịkwa: AnyDesk na - enye gị ohere ịdebanye kọntaktị na njikọ ha site na iji kalenda arụnyere, na - elekọta onye na - enweghị ntanetị na - enweghị njikọ. Ọ na-enyekwa ohere iji aha nnabata, nke akpọrọ "AnyDesk ID" nke ejikọtara ya na aha njirimara nkeonwe iji kọwaa kọmpụta jikwaa, nke agbakwunyere akara ngosi, iji kwado ohere na mmekọrịta site na iji akara njirimara.
Agbapụta: AnyDesk enwere ike iji ya n'efu, mana ọ na-eji ikikere onye ọrụ na-ekpuchi nsụgharị niile nke ọdịnihu, na-enweghị iwepụta ụgwọ maka mmelite. Na-eme ka nsụgharị ya niile dakọtara na ibe ha.
Ibudata na nwụnye
AnyDesk na ụdị 5.0.0 nke ugbu a na nke anyị, na Linux, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ iji wụnye. Agbanyeghị, anyị ga-ebudata ngwungwu maka DEBIAN / Ubuntu / Mint nke nwere aha 64 Bit nke ugbu a, ihe ndị a: "Anydesk_5.0.0-1_amd64.deb". Kedu nke nwekwara naanị 4,3 MB.
Agbanyeghị, ebe ọ bụ ọtụtụ nyiwe na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, ọ nwere nsụgharị ndị a, nha na usoro:
Windows, v5.0.5 (2,8 MB): .exe faịlụ
MacOS, v4.3.0 (3,8 MB): .dmg faịlụ
Android, v5.0.2 (7,6 MB): .apk faịlụ
iOS, v2.7.3 (6,1 MB): Faịlụ .ipa
FreeBSD, v2.9.1 (2,1 MB): faịlụ .tar.gz
Raspi Pi, v2.9.4 (2,1 MB): .deb faịlụ
Otú ọ dị, na nhọrọ maka Linux niile nhọrọ gosiri na-esonụ oyiyi dị:
Mgbe ị wụnye ngwugwu "anydesk_5.0.0-1_amd64.deb" site n'ụdị ama ama ama, maka usoro ngwugwu a kwuru, anyị nwere ike ịgba ọsọ ngwa ahụ, site na nchịkọta ihe omume nke GNU / Linux gaa n'ihu hazie ma nwalee ya. Mụ onwe m ejirila ya ọtụtụ na Debian na Ubuntu dabere na sistemụ arụmọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Ihu ọma mgbe wụnye ya, ọ dị njikere iji, ebe ọ bụ na na mbido mbụ a na-ahazi ya na ndabara na ihe pụrụ iche "AnyDesk ID" na Aha ojii (Otu). Ọ ga - adịgide ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịhazi ihe dịka:
Automatic ohere ịnweta paswọọdụ
Gbanwee Aha ojii na AnyDesk NJ na Interface
Gbanwee ihe ntanetịime ntanetị na ntanetị
Gbanwee oke nnyefe maka nnyefe ntanetị.
AnyDesk abụghị naanị ngwa dị mfe iji budata, wụnye, hazie ma jiri ya, mana ọ nwekwara arụmọrụ dị mma yana nkwụsi ike dị mma. na nyiwe dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ karia GNU / Linux. Na mgbakwunye na inye ezigbo nchekwa na nzuzo maka njikọ dịpụrụ adịpụ mere.
Onwe m, ejirila m ọtụtụ GNU / Linux ndị ọzọ nweere onwe ha na ndị ọzọ, mana mgbe ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa chọrọ ihe siri ike karị, ọrụ na ntụkwasị obi, Ana m akwado ya dị ka asọmpi maka ngwa nwere ụdị atụmatụ dịka TeamViewer.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » AnyDesk: Ihe ozo di nma maka ijikwa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ
Ọfọn, ejiri m ya ruo oge ụfọdụ ma ọ dị irè ma ewezuga otu nsogbu na-akpasu iwe, ọ naghị ekwe ka ị na-agba ọsọ ọrụ nchịkwa nke dị ezigbo mkpa mgbe ịchọrọ idozi ihe dị anya, enwere olile anya na edozila nke a na ụdị a
Zaghachi Basilio Hernandez
Enweghị m ike ịgwa gị, agaghị m eme ihe gafere na ya. Naanị nyochaa.
Oge ikpeazụ m nwara ya, enweghị m ike ịchọta nhọrọ maka ya ịmalite na sistemụ ahụ. Enwere m olileanya na na mmelite ikpeazụ ha wepụrụ nhọrọ a ka ha nwee ike hazie ya.
M gbanyụọ ya site na Linux nhọrọ a na-akpọ nnọkọ na-amalite. N'ebe ahụ ka m na-enyocha ibu ya na mbido.
anyị ga-akwado ya, mana m na-ajụ: «ndị ahịa chọrọ ihe siri ike karị, arụ ọrụ ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya» bụ nwaafọ linin ngwa abụghị nke a pụrụ ịtụkwasị obi?
Tụkwasị obi na usoro ntụkwasị obi (nchekwa na nzuzo) mana n'ihe gbasara arụmọrụ dị elu (nkwụsi ike + ọrụ). Mana echere m na ị bụ onye ziri ezi, na ọ nwere ike ọ bụghị okwu ziri ezi n'okwu ahụ ...
Sam Hartman bụ Debian ọhụrụ DPL
Ntinye OnionShare: Nyefee Njikwa Iji Network Network